Umtsalane weTuscan wevilla - emaphandleni - I-Airbnb
Umtsalane weTuscan wevilla - emaphandleni
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguGiuseppe
Kwilali yaseTuscan ebukekayo, phakathi kwemithi yomnquma kunye nezidiliya i-villa yamatye endala, ekwindawo yobuchule yokubamba iimfihlo ezifihliweyo zeTuscany kunye ne-Umbria.
Uya kufumana zonke izinto ezithuthuzelayo zangoku ezifana ne-air conditioning kunye nedama lokuqubha elinendawo ye-spa yokuphumla
I-Villa Senaia yindlu yasefama yakudala ebekwe ngamatye kunye nemiqadi yomthi kwindawo entle esendulini kwindawo entle phakathi kweArezzo neCortona.
Inika uxolo kunye nokuzola kunye nentuthuzelo kwindawo ekhangayo.
Eli khaya lihle linazo zonke izibonelelo zokuba semaphandleni, kucetyiswa kuzo zonke iindwendwe kwiholide kwabo bafuna uxolo kunye nokuzola kunye nokuphumla, kodwa ngamanye amaxesha ufuna ukwenza uhambo lokuhlola iidolophu ezintle zeenduli zaseTuscany.
Idolophu ekufutshane eneendawo zokutyela ezininzi kunye neevenkile kumgama weekhilomitha ezi-3 kuphela kwaye izixeko zenkcubeko ezinjengeCortona, Arezzo, Montepulciano, Anghiari, Pienza, Siena kunye neFlorence kunye neemarike eziqhelekileyo zasekhaya, zonke zinokufikelelwa ngaphantsi kweyure.
Iwayini luphawu oludumileyo lweTuscan kwaye unokuchitha ixesha elithile uphonononga izidiliya ezininzi okanye wenze ukhenketho lwewayini (NgesiNgesi, isiFrentshi.Danish, isiJamani)
Ngexesha lokuhlala kwakho, unokuququzelela iiklasi zokupheka, ukuzingela i-truffle, ukurenta imoto, ukuthengiswa kweoyile yomnquma, njl njl.
Kukho ingca enkulu eyenziwe nge-manicure enika umthunzi phantsi kwemithi yomnquma emininzi.
Kufuphi nendlu kukho indawo yokupaka egqunyiweyo yeendwendwe,
Kukwakho nendawo egqunyiweyo yebarbecue enegriza (ibarbecue) kunye neoveni yepizza kunye nesonka, ikwayindawo yokutyela engaphandle.
Ngaphambi kwevilla kukho i-12 x 6 m ichibi lokuqubha elinendawo esempilweni entle.
Kumgangatho ophantsi wendlu kukho ikhitshi elixhotyiswe ngokufanelekileyo kunye netafile yokutyela abantu abasibhozo kwaye yindawo efanelekileyo yokuhlwa kwentwasahlobo yokuqala kunye nekwindla.
ngelixa iingokuhlwa ezifudumeleyo zasehlotyeni nje ngaphandle ekhitshini kwiveranda elibheke echibini kunye nelali ephakathi, enye itafile yayilungiselelwe ukuba itye ngaphandle, ukuphulaphula iqakamba kunye neecicadas zinandipha incoko ehleka ngelixa usonwabela ukutya kunye newayini yaseTuscan.
Kwinqanaba elifanayo, kukho igumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini kunye nokufikelela kwi-terrace.
Igumbi lokuhlala likufuphi nekhitshi kunye negumbi lokutyela elihonjiswe ngokunambitheka libonelela ngendawo yokulala epholileyo phambi kwendawo yomlilo ibonelela ngokufihlwa kwikhabhathi yeenkonzo zobugcisa ezinjengomabonwakude ngoqhagamshelo lwesathelayithi, isidlali seDVD kunye nestereo. Kukho kwakhona ukufikelela kwi-Intanethi kwi-wi-fi. Kukho negumbi lokuhlambela elineshawa, yangasese kunye ne-bidet.
Izinyuko ezikhokelela kwigalari kumgangatho wokuqala, kunye nokufikelela kumagumbi okulala amathathu kunye negumbi lokuhlambela elineentengiso zebhabhu, indlu yangasese kunye ne-bidet. Elinye lala magumbi linegumbi lokuhlambela labucala elineshawa, indlu yangasese kunye ne-bidet, ibhedi ephindwe kabini kunye nokufikelela kwibalcony. Amanye amagumbi amabini okulala ngalinye lineebhedi ezimbini ezingatshatanga. Omnye wabo unokufikelela kwi-balcony.
Ukufudumeza kunye ne-air conditioning ekhoyo kwisicelo ayifakiwe kwixabiso le-villa.
Kuya kuba kuhle ukuba nemoto ukonwabela le villa kwaye uphonononge indawo yendawo kunye neTuscany ngokubanzi, sele unombono wokuba zintle iinduli eziqengqelekayo kulo mmandla wase-Italiya, ubume bayo boojongilanga kunye namasimi epoppies, izidiliya. , ukutya okutsha kunye newayini ukufudumala kwemvelo kwabantu baseTuscan.
Xa ucinga ukucwangcisa iholide yakho ezi zezinye umfanekiso Tuscany
Le villa ibekwe kwinduli yelizwe eCastiglion Fiorentino ejonge zombini iVal di Chio kunye nePreappennino engqongwe ziindawo ezintle zomnquma. Ukutya okuyinyani kunye neevenkile zasekhaya kwiilali ezijikelezileyo kukumgama omfutshane.
Ndiyafumaneka kwiindwendwe ngalo lonke ixesha zifuna ukubuza ulwazi.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Castiglion Fiorentino